मधुमेह भएका विरा’मीका लागि वरदान यो फल ! – Yuwa Aawaj
चैत्र २९, २०७७ आइतबार 381
पछिल्ला दिनमा मानिसको व्यस्त जीवनशैली र अस्वस्थ्य खानपानका कारण मानिसमा विभिन्न खालका रोगहरु लाग्ने गरेका छन् ।
यस्ता रोगहरु बढ्नुमा मानिसको विलाशी जीवनशैली व्यायामको कमी आदीका कारणले मानिसमा रोग बढीरहेको छ । जसका कारण म’धुमेह, हर्ट अ’ट्याक, किड्नी सम्बन्धी रो’गीको संख्या पछिल्ला दिनमा बढीरहेको छ ।
रागेलागेपछि विभिन्न औ’षधिहरुको प्रयोग गरिन्छ । तर, यस्ता रोग लागेको खण्डमा प्रा’कृतिक रुपमा पाइने केही खाद्य पदा’र्थहरुको प्रयोग गर्दा त्यसले थप फाइदा पुग्छ । मधुमेह भएका वि’रामीका लागि जामुन अ’त्यन्त फाइदाजनक हुन्छ ।
यसले म’धुमेहलाई पूर्ण रुपमा नियन्त्रणमा लिने आयु’र्वेदको दाबी छ । ललितपुरको भाइरल ड’रलाग्दो अ’चम्मको हल्लिने ठाउ, ज्या’न जो’खिममा राखेर यस्तो गर्छन ।
अहिले यो टिकटक, फेस्बुक र यु’टयुबको जमानामा कतिबेला के भाईरल हुन्छ भन्ने कुराको केही अतोपतोनै हुदैन । आज हामी त्यस्तै रिपो’र्ट लिएर आएका छौ, जुन टिकटकको १० सेकेन्डको भिडियोलाई ६ दिनमा नेपाली दर्शक तर प्राय बिदेशी दर्शकहरुले गरेर ५ करोडले हेरेर कमेन्ट गरे कुन ठाउ हो ?
र यो कहा“ छ भनेर बिदेशीहरुका कमेन्ट यति धेरै आएकी जहा कमेन्ट गरेकै पोस्टमा ८०—९० हजार लाइक पनि पुग्यो ।
आकृति केसी युजर नाम भएको उत आइडीमा यति धेरै लाइक र कमेन्ट आएकी मानौ टिकटकका सबै रेकर्ड तोडियो ।
Prevसम्पत्ति र दाजु-भाइ नभएका होइनन्, तर गजेन्द्रको वास बनेको छ नौबिसे खोलाको पुल !
Nextराज्यको तलब लिने सबैका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना हुनुपर्ने !
इजरायल रोजगार खुल्यो, योग्यता के-के चाहिन्छ ? यस्तो छ छनौट प्रक्रिया ।